Drozdova Natalya Stepanovna - को थिएटर Togliatti मा "व्हील" को पूर्व कलात्मक निर्देशक। उहाँले शहर मा पहिलो व्यावसायिक नाटक थिएटर थियो। आफ्नो मुग्ध पार्ने संगीतको अब दुवै वयस्क निर्माण र बच्चाहरु समावेश छ।
"व्हील" को थिएटर 1988 मा खोलिएको थियो। यसको निर्माता Gleb Drozdov थियो। एक करार आधारमा recruited कम्पनी - यो एउटा प्रयोगात्मक थिएटर थियो। Gleb एक थिएटर विद्यार्थी र साथीहरूले मा भेला भए। पत्नी - Drozdova Natalya, "पाङ्ग्रा" को अग्रणी Actresses एक भएको छ।
यसको उत्पत्तिभन्दा पछि दुई महिना - आफ्नो भवन कम्पनी समय धेरै छोटो अवधिमा जित्यो। शहर पार्टी समितिको पहिलो सचिव, कला ठूलो प्रेमी थियो र सबै सेना शहर पहिलो व्यावसायिक थिएटर सिर्जना गर्न योगदान। यसको अस्तित्व को पहिलो वर्ष मा, "व्हील" आफ्नो मुग्ध पार्ने संगीतको मात्र शास्त्रीय काम समावेश।
आफ्नो मृत्यु सम्म, Gleb Borisovich आफ्नो सृष्टिको undisputed नेता थियो। 2000 मा, त्यो जो समुदाय को लागि एक विशाल हानि थियो, मृत्यु भयो। पतिको ठाउँ लिए पछि Drozdova नतालिया। त्यो 2012 सम्म थिएटर लाग्यौं। Nataliya Stepanovna को शहर संग संघर्ष को एक परिणाम रूपमा "व्हील" छोड्न थियो।
आज थिएटर व्लादिमीर Gennadevich Hruschov द्वारा लाग्यौं छ।
थिएटर "व्हील" आफ्नो दर्शकहरूलाई निम्न प्रदर्शन प्रदान गर्दछ:
"भेट्यो कुकुर, समुद्र किनारा चलिरहेको"।
"आइमाइहरु को यात्रा।"
"एक लाभदायक पोस्ट"।
"Dunno को साहसिक"।
"नाभिकहरु, महिला र समस्या।"
"छ Josephine र नेपोलियन।"
"ओह असह्य विवाह।"
"गृष्म को बीच रात गरेको सपना।"
"खजाना नक्शा को रहस्य।"
"विजय को रेड वाइन।"
र धेरै अन्य।
थिएटर "व्हील" जस्तै आफ्नो चरण प्रतिभाशाली अभिनेता, मा संकलित छ:
पनि troupe धेरै अन्य अभिनेता, कुनै कम भेंट।
थिएटर "व्हील" आफ्नो दर्शकहरूको लागि रोचक परियोजनाहरूको एक नम्बर लागू गरिएको छ।
"दृश्य पछाडि विश्व" - यो भ्रमण714 वर्ष देखि बच्चाहरु लागि हो। जहाँ केटाहरू र बालिका चरण को अन्य पक्षमा भइरहेको छ के सिक्न सक्छौं, प्रदर्शन को तयारी संग र।
अर्को "पाङ्ग्रा" परियोजना - एक साहित्यिक हल "थियेटर पर्यावरण"। त्यहाँ दर्शक र सबैलाई प्रदर्शन सिर्जना संलग्न एक संवाद छ। अभिनेता र निर्देशक, उत्पादन मा आफ्नो काम छलफल आफ्नो विचार साझेदारी र दर्शक सबै सुन्न मात्र होइन, तर पनि आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्न मौका छ।
परियोजना "को थिएटर लागि थिएटर।" परियोजना रचनात्मक अवकाश मा दर्शक समावेश गर्न जा रहेको छ, यो समय खर्च गर्न रोचक छ शहर वसोवास सक्षम जो troupe, को मित्र को एउटा सर्कल गठन। भौतिक र प्राविधिक आधार आफ्नै बल विकास गर्न मद्दत गर्छ कि एक थिएटर। मित्र "पाङ्ग्राहरू" को लागि अक्सर मात्र तिनीहरूलाई पहुँच योग्य छन् कि वीआईपी प्रदर्शन देखाइएको छ।
चौथो परियोजना "पाङ्ग्रा" छ - भनिने थिएटर क्लब "प्रधानमन्त्री-लीग।" यसको कलात्मक निर्देशक को अध्यक्ष र संस्थापक एम एन Chumachenko छ।
क्लब शहर को सांस्कृतिक ठाउँ विस्तार र कला मार्फत नागरिक अन्तरक्रिया प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको। उहाँले पनि व्यापक सर्कलमा थिएटर popularize गर्न आयोजित। परियोजना सम्पन्न छलफलहरू देखाउन र चरण काम विभिन्न विधाहरू मा आफ्नो हात प्रयास गर्न, आफ्नो क्षमता महसुस गर्न मौका दिइन्छ जो योग्यता, पत्ता लगाउन, प्रदर्शन बहस अनुभव को विनिमय, साथै कला प्रेमीहरूको बीचमा।
Drozdov अभिनेत्री नतालिया लिथुआनियाई SSR मा जन्म भएको थियो। 1975 मा, त्यो कला को वोरोनिश संस्थान देखि स्नातक। कि नतालिया नौ वर्ष को लागि यस शहर मा काम गरेपछि, अभिनेत्री थियेटर ए Koltsov पछि नाम। 1984 देखि 1988 को त्यो एफ जी Volkova पछि नाम Yaroslavl नाटक सेवा गरें। 1988 मा उहाँले Togliatti शहर मा थिएटर "व्हील" को एक अभिनेत्री भयो। पतिको त्यहाँ कलात्मक निर्देशक थियो। पतिको मृत्यु पछि - Gleb Drozdova, नतालिया Stepanovna आफ्नो पोस्ट गरे।
1999 मा, अभिनेत्री "रूस को जनता कलाकार" शीर्षक सम्मानित गरिएको थियो।
2011 मा, त्यो नियुक्त गरेको थिएटर "व्हील" को निर्देशक। एक वर्ष पछि Drozdova नतालिया किनभने एक द्वन्द्व मेयर संग को खारेज भएको थियो। Natalya Stepanovna जस्तै, र निर्देशक, र कलात्मक निर्देशक हुन - उहाँले एक व्यक्ति दुई स्थान संयोजन गर्न गाह्रो छ कि निर्णय गरे। उहाँलाई मौलिक असहमत संग त्यो थियो। फलस्वरूप, मेयर अर्को व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त, र यो मात्र कलात्मक निर्देशक को स्थिति मा बायाँ। Natalya Stepanovna यो दुई व्यक्ति एक हुन थप सुविधाजनक छ भनेर विश्वास र यसलाई आफ्नो काम सीमित थियो, जो मालिकहरुलाई केही प्रकारको थियो भन्दा चाहन्थे छ। फलस्वरूप, Nikolai Drozdov संग आपसमा ठ्याम्मै मिल्दैनथे विवाद करार विस्तार भएको छैन। यो 21 मान्छे को मात्रा मा थिएटर अभिनेता को बाहिर गए पछि।
अब नतालिया Drozdova विश्वविद्यालय मा अभिनय विभाग को टाउको को स्थिति धारण। वी एन Tatischeva।
यो श्रृंखला "व्यापक नदी"
2008 मा नतालिया Drozdova, महिला Shura को भूमिका मा टिभी श्रृंखला मा तारा अङ्कित। यो melodrama "व्यापक नदी" भनिन्छ। चित्रकला मुख्य च्यानलहरू एक थिए। श्रेणीमा, अलेक्जेन्डर Pashutin, Andrei Chernyshov मिखाइल Safronov, व्लादिमीर Sterzhakov र अरूलाई जस्तै luminaries द्वारा प्ले।
विषयको "व्यापक नदी" उत्तरी माछा मार्ने गाउँमा र त्यहाँका बासिन्दाहरूले को कथा बताउँछ। यस श्रृंखला को मुख्य हेरोइन - रोमान्टिक सौन्दर्य Anya। त्यो एक नर्स रूपमा काम गर्दछ र एउटा सेतो घोडा मा राजकुमार लागि प्रतीक्षामा छ। चाँडै, गाउँमा मास्को मैक्सिम देखि सर्जन आउँछ। अन्ना उहाँलाई प्रेम पर्छ। र जवान मान्छे सम्बन्ध छ आपत्ति छैन। मा नै समय मा गाउँमा देखा पर्छ पत्रुस - छोरा अध्यक्ष। उहाँले अन्ना प्रेम पतन, र कुनै पनि मूल्य मा यसलाई हासिल गर्न चाहन्छ। कोसँग आनन्द रोमान्टिक केटी पाउन हुनेछ?
यो श्रृंखला मा Drozdov अभिनेत्री नायाब प्ले छ।
दिमित्री Dyuzhev: Filmography। एक अभिनेता को व्यक्तिगत जीवन
फिल्म "इटालियन अय्यूब": अभिनेता र भूमिकाको। Dzheyson Steytem, हाँसो सेट र अरूलाई
फिल्म "खुला विन्डो": समीक्षा। "Windows खुला» (ओपन विंडोज, 2014): समीक्षा
बोतल पिजन: समीक्षा
के मानसिक मंदता कारण?
सबैभन्दा स्वादिष्ट पाइ। कसरी खाना पकाउनु?
बिजुली "शेवरलेट Niva": सम्भव इनकार र मरम्मत
जहाँ अहिले पैसा प्राप्त गर्न, वा कसरी कठिन वित्तीय अवस्था बाहिर प्राप्त गर्न